Fifidianana solombavambahoaka :: Tsy naharakotra an’i Madagasikara ireo antoko malaza • AoRaha
Fifidianana solombavambahoaka Tsy naharakotra an’i Madagasikara ireo antoko malaza
Dimy amby dimampolo sy valonjato (855) no fitambaran’ireo antontan-taratasy voarain’ny Rafitra mpanara-maso ny filatsahan- kofidiana eny anivon’ny Distrika (Ovec) manerana ny Nosy. Antsasa-manila (515) no mirotsaka amin’ ny anaran’ny tsy miankina ary efapolo sy telonjato avy amina antoko.
Araka ny nambaran’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) teny Alarobia, omaly, dia tsy ireo rehetra ireo no voatazona anatin’ny lisitra farany havoaka amin’ny 19 marsa hoavy izao.
Tsy nisy antoko naha- rakotra an’i Madagasikara na ireo antoko roa nanolotra kandidà tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo sady nifaninanana tamin’ ny fihodinana faharoa aza, Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD) sy ny Tiako i Madagasikara (TIM), hoy ny Ceni.
« Dimy amby valopolo amin’ireo antoko pôlitika folo sy roanjato mijoro ara- dalàna eto Madagasikara no nanolotra kandidà. Mahajanga I no nandraisana antontan-taratasy betsaka indrindra (16). Ny vitsy indrindra kosa dia miisa telo, toy ny any Vohipeno, Mahanoro, Sakaraha sy faritra telo hafa», araka ny tatitra voaray.
Saika ny Tim sy ny IRD sy ireo mirotsaka amin’ny anaran’ny tsy miankina no any amin’ireo distrika ireo. Maro amin’ireo mirotsaka amin’ny anaran’ny tsy miankina anefa no milaza fa manohana ny firehan-kevitry ny Filoha am-perinasa. Aorian’ny fanadiovana ny lisitra, mety hisy ny kandidà samy manohana ny filoha hifanandrina anaty distrika iray. Azo heverina ihany koa, araka ny fanambaran’ny Ceni, ny tsy fisiana afa tsy kandidà iray anaty distrika iray. Ny 15 marsa no handraisana ny fanapahan- kevitra avy any amin’ny Ovec manerana ny Nosy. Afaka mametraka fitoriana eny amin’ny Ceni, sy ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana ireo tsy tafiditra anaty lisitra alohan’ny 19 marsa.
Fampihavanana malagasy :: Nahazo famotsoran-keloka ireo gadra pôlitikan’ny raharaha 2002